Galaxy Unpacked 2020 မှာဘယ်လို ရင်ခုန်စရာ Products တွေထွက်လာမလဲ? — Anycall Mobile
By liam July 25, 20204Mins Read
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း Samsung ဟာ နောက်လ August ၅ ရက်နေ့မှာ Unpacked 2020 Event ကိုကျင်းပလာတော့မှာပါ။ ထိုပွဲမှာ Samsung အနေနဲ့ Devices အသစ် ၅ မျိုးကိုမိတ်ဆက်လာမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
ဘယ်လို Device တွေကိုမိတ်ဆက်လာမလဲ?
လက်ရှိသတင်းတွေအရတော့ ဒီ Devices တွေထဲမှာ Samsung Galaxy Note 20 ပါဝင်လာမယ်လို့ပဲ သတင်းတွေထွက်ထားပါသေးတယ်။ တစ်ခြား Devices တွေကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
မသေချာသေးပေမယ့် Rumors တွေအရတော့ Unpack Event မှာတွေ့ရမယ့် Device Galaxy Device တွေကတော့ အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Galaxy Note 20 တင်မဟုတ်ပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ Device တွေလည်းပါလာအုံးမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီ Unpack Event မှာဘယ်လို Device တွေပါလာမလဲ…. အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Unpacked 2020 မှာ Samsung Galaxy Note 20 ထွက်လာဖို့က သေချာသလောက်ရှိပြီး သူကပဲ Unpacked 2020 ပွဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ ပါဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
ထို Galaxy Note 20 နဲ့အတူ Samsung Galaxy Note 20 Plus ၊ the Samsung Galaxy Note 20 Ultra ဖုန်းတို့ကိုပါမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိမျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း Smasung ဘက်က Samsung Galaxy Note 20 Plus ၊ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ကိုပါထုတ်လာမယ့်အကြောင်းကို အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ကောလဟလတွေအရ Samsung Galaxy Note 20 မှာ 120Hz Refresh Rate ပါတဲ့ 6.7-inch FHD+ Screen နဲ့အတူ Exynos 990 or Snapdragon 865 Plus Chipset ကိုသုံးပေးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ နောက်ထပ်
8GB of RAM ၊ 4,300mAh Battery နဲ့ 12MP Main Sensor + 12MP Ultra-wide + 64MP Telephoto one (3x optical zoom) တို့ပါတဲ့ Triple-lens Camera ကိုထည့်ပေးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
Note 20 Plus အနေနဲ့ထွက်လာနိုင်တဲ့ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ဟာလည်း Exynos 990 or Snapdragon 865 Plus Chipset ၊ 120Hz Refresh Rate ပါလာနိုင်ဖို့ရှိနေပြီး ပိုကြီးလာတဲ့
6.9-inch QHD+ Screen ၊ 12GB RAM ၊ 4,500mAh Battery ၊ 108MP Main Sensor + 12MP ultra-wide + 12MP Periscope ( 5x optical zoom) တို့ပါတဲ့ Triple-Lens camera ကိုထည့်ပေးလာဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
Unpacked 2020 မှာ Samsung Galaxy Note 20 တစ်မျိုးတည်းက အဓိကဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Galaxy Note 20 နဲ့ အတူ Samsung Fold2ကလည်း အဓိကဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ထွက်လာမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ထားပါတယ်။
Samsung Fold2ဟာဆိုရင် Samsung ရဲ့ Foldable ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဖြစ်ပြီး ကောလဟလ တွေအရ ဖုန်းဟာ Samsung Galaxy Z Fold2အနေနဲ့ထွက်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ နာမည်အရဆို Samsung Galaxy Z Fold2ဟာ Samsung Galaxy Fold နဲ့ Samsung Galaxy Z Flip တို့ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်လာမယ့်ပုံပါပဲ။
နောက်ထပ် ဒီ Fold2မှာ 120Hz Refresh Rate ရတဲ့ 7.7-inch Main Screen နဲ့အတူ 6.23-inch ရှိတဲ့ Secondary Display ပါဝင်လာမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ထားပါတယ်။ ဖုန်းမှာ 4,365 mAh Battery ၊ 64MP, 16MP နဲ့ 12MP sensors တို့ပါတဲ့ Triple Camera နဲ့ Snapdragon 865 Plus chipset ကိုသုံးပေးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာကောလအနေနဲ့ သာထွက်ထားသေးတာမလို့ ဖုန်းထွက်လာတဲ့ အခါမှာအပြောင်းအလဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Samsung အနေနဲ့ Unpacked 2020 မှာ ဖုန်းတွေအပြင် Samsung Galaxy Watch3ကိုပါမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Samsung Galaxy Watch3ဟာဆိုရင် Galaxy Watch ရဲ့ Successor အနေနဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါက်ကြားမှုတွေအရ Samsung Galaxy Watch3ဟာ Galaxy Watch လိုမျိုး Physical Rotating Bezel ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး 8GB Storage ၊ GPS ၊ LTE နဲ့5ATM Water resistance ပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်ထပ် Samsung Galaxy Watch Active2မှာပါတဲ့ ECG feature (နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းပေးမယ့် Feature) လည်းပါဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Specs တွေအရဆို Samsung Galaxy Watch3ဟာ Galaxy Watch ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Feature တွေပါဝင်လာဖို့က အသေအချာပါပဲ။
Samsung Galaxy Watch Active3ဟာလည်း ကောလဟလအဆင့်မှာသာရှိသေးတဲ့ အတွက် Unpacked 2020 မှာထွက်လာဖို့က သိပ်တော့မသေချာပါဘူး။
နောက်ထပ် Samsung မိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Device တစ်ခုကတော့ Samsung Galaxy Tab S7 Tablet ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Galaxy Tab S7 ဟာလည်း Note 20 လိုပဲ ရိုးရိုး Tab S7 နဲ့ Samsung Galaxy Tab S7 Plus ဆိုပြီးထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
ပေါက်ကြားမှုတွေအရ Galaxy Tab S7 မှာ 120Hz Refresh Rate ရတဲ့ 11-inch 1600 x 2560 Screen ၊ Snapdragon 865 Plus Chipset ၊ 13MP Rear Camera ၊ 5MP front ၊ 128GB of Storage နဲ့ 8,000mAh Battery ပါဝင်လာမယ်လို့သိထားရပါတယ်။
Samsung Galaxy Tab S7 Plus မှာတော့ In-Screen Fingerprint Scanner ပါတဲ့ 12.4-Inch 1752 x 2800 screen ၊ Snapdragon 865 Plus Chipset ၊ 13MP + 5MP(dual-lens rear camera) ၊ 5MP Front-Facing Camera နဲ့ 10,090 mAh battery ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
အခု Galaxy Buds Live ကလည်း ကောလလအနေနဲ့သာထွက်ထားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Galaxy Buds Live ပုံစံကိုတော့ Samsung ကိုယ်တိုင်ကပဲ Tease လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်မလို့ Galaxy Buds Live ကို Unpacked 2020 တွေ့လာရဖို့ မျှော်လင့်ထားရတာပါ၊။
အရင်ကထွက်ထားတဲ့ပုံတွေအရ Galaxy Buds Live ရဲ့ပုံစံဟာ ကျောက်ကပ်သဏ္ဌာန်ပဲထောင့် ပုံစံ ရှိပြီး Noise Cancelling Tech နဲ့တစ်ခြား Fitness Tracking Features တွေပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Device တွေကတော့ ‌August5ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Unpacked 2020 Event မှာ မိတ်ဆက်လာနိုင်တဲ့ Devices တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Devices တွေမိတ်ဆက်လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးတာမလို့ ပွဲမှာ အပေါ်က ပစ္စည်းတွေအကုန်ထွက်လာနိုင်ခြေမရှိပါဘူး။
ဒီ Products တွေအပြင်တစ်ခြား Products တွေပါ Samsung အနေနဲ့ ထုတ်လာဖို့ရှိနေပါသေးတယ်…
ကဲစာဖတ်သူအဖို့ ဘယ် Products တွေကို မျှော်လင့်နေလဲ?
Samsung အနေနဲ့ကော ပွဲမှာ ဘယ်လို အသစ်သစ်တဲ့ Products တွေကိုမိတ်ဆက်သွားမလဲ?
လာမယ့် August ၅ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် Unpacked Event ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ…